SMT Packages - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
With anopfuura 20 'ruzivo indasitiri ino, tinogona kupa mumwe-chichiita negadziriso vatengi kusanganisira pcb nhema zvinoumba zvokuvakisa uye mabasa pcb Assembly. Nokuda inoomesera kugadzira mitemo, vachiwedzera ruzivo rwokugadzirwa kwezvinhu chido kuedza kuti achangobuda ruzivo, hatina akazviunganidzira dzakawanda nezvaanogona kubata mhando dzakasiyana-siyana chinoumba Mabhokisi akadai BGA, PBGA, pafiripi Chip, CSP uye WLCSP.
BGA, pfupi kuti bhora afoot wakazvigadzira, inzira SMT (pemvura Mount Technology) pasuru kuti kuwedzera kushandiswa Integrated nematunhu (ICs). BGA Zvinobatsira kuvandudzika kuti solder kwemajoini rakavimbika.
BGA rinoratidza zvinotevera zvazvakanakira:
• vakarongeka kushandiswa pcb nzvimbo
BGA pasuru nzvimbo kubatana pasi SMD (pamusoro Mount mudziyo) pasuru pane kumativi kuitira kuti nzvimbo inogona zvikurukuru kuponeswa.
• Improvement tichitarisa chafariz uye magetsi chaitwa
Sezvo BGA pasuru kunobatsira kuderedza inductance simba uye pasi ndege uye impedance kudzorwa chiratidzo mitsetse, kupisa zvinogona vabva ikanyanya, zvinobatsira kuti vakuchidzire nounzenza.
• Kuwedzera pane kugadzira unobereka
Nokuda mberi solder rakavimbika, BGA anogona kuramba tichishandisa guru nzvimbo pakati kubatana uye yepamusoro pokunamatidza.
• Package ukobvu rutapudzo
We dzidzira mukutarisira yakaisvonaka namo zvinoumba gungano uye kusvikira zvino tinogona kukurira BGAs ane nenamo shoma anogona kuva diki sezvo 0.35mm.
Kana ukaisa wenguva chijana-kiyi pcb gungano kuti pamusoro BGA pasuru, mainjiniya yedu, chokutanga, ongorora kwenyu pcb mafaira uye BGA datasheet kuti ipe nyaya imwe chafariz Profile umo zvinhu zvinofanira kufungwa nezvazvo akadai BGA saizi , bhora zvinhu etc. Vasati danho iri, ticharamba ongororazvaunoisa pcb magadzirirwo BGA uye anopa mumwe FREE DFM cheki kuziva zvinhu zvinokosha kuti gungano pcb kusanganisira substrate zvinhu, pamusoro kumugumo, soldermask Clearance, etc.
Nokuda kuti unhu BGA pasuru, zvoga Optical Inspection (Aoi) anokundikana kusangana rokuongorora zvinodiwa. Isu ita BGA rokuongorora kubudikidza zvoga X-ray Inspection (AXI) midziyo inokwanisa pokutsvaga pokunamatidza urema panguva mangwanani Danho asati vhoriyamu mukugadzira.
PBGA, pfupi nokuti epurasitiki bhora afoot wakazvigadzira, ndiyo imwe yenzvimbo dzine mukurumbira kavha siyana kuti svikiro yakakwirira-pamwero I / O namano. Zvichienderana laminate substrate ine zvimwe mhangura akaturikidzana mukati, PBGA zvinobetsera Kupisa nounzenza uye anogona tigutse zvido makuru hukuru muviri uye uwandu balls kuti kusangana rakasiyana-siyana zvinodiwa.
PBGA rinoratidza zvinotevera zvazvakanakira:
• Zvaida yakaderera inductance
• Kuita pamusoro pegomo nyore
• Zvirongwa yakaderera mutengo
• Kuramba nekaupenyu yakakwirira rakavimbika
• Kuderedza coplanar nyaya
• Kuwana pfupi mukuru-pamwero chafariz uye magetsi chaitwa
Sezvo nzira magetsi kubatana, pafiripi Chip richibatanidza kufa uye pasuru substrate kubudikidza zvakananga kusangana pasi IC kuitira kuti kuda substrate, wedunhu bhodhi kana mutakuri. Mutsa pafiripi Chip dzinosanganisira:
• Kuderedza chiratidzo inductance uye simba / pasi inductanc
• kudzikira uwandu pasuru nembambo uye kukura anofa
• Kuwedzera chiratidzo arambe achirema
CSP uye WLCSP
Kusvikira zvino, CSP ndiyo azvino chimiro pasuru, pfupi nokuti Chip akamboona pasuru. Sezvo rondedzero zita rayo rinoratidza, CSP anotaura pasuru ane saizi akafanana ane Chip pamwe kusatsarukana pamusoro pachena Chips chapedzwa. CSP inopa kavha mhinduro iri denser uye nyore, isingadhuri uye dzichimhanya. Uye zvinotevera zviri CSP chinobatsira kukonzera kuwedzera kuungano goho uye kuderedza mukugadzira mutengo.
CSP kwakakurumbira saka uye vakarongeka pane indasitiri iyi kuti kusvika iye zvino kune pamusoro 50 mhando CSPs mhuri yayo uye nhamba ichiri kukura ose zuva. A yakawanda hunhu uye zvimwe CSP vari contributive kuti wayo kwazvo kukurumbira mumunda ichi:
• rutapudzo kuti pasuru saizi
CSP anogona kuwana kavha kunyatsoshanda yakakwirira sezvinoita 83% kana kupfuura, zvikuru kuwedzera arambe achirema mishonga.
• Self kunangiswa
CSP anokwanisa nokuzviruramisa dzichienderana mu nedanho pcb gungano reflow zvokuti zvinoita SMT nyore.
• Kushaya hwakakungwa zvinoisa
Pasina kutora chikamu kwe hwakakungwa zvinoisa, coplanar nyaya inogona kuderedzwa zvikuru.
WLCSP, pfupi nokuti chitete pamwero Chip pamwero pasuru, ndiyo mhando chaiyo CSP kubva kwayo rapera pasuru akava Chip-pamwero saizi. WLCSP zvinoreva IC kavha michina panguva chitete pamwero. A Mudziyo pamwe WLCSP rinoratidza vanofa hwaakange inofa anorovera kana solder balls hwakarongwa pagungano I / O namo, musangano zvinodiwa zvetsika redunhu bhodhi gungano kwendangariro.
Zvakanakira WLCSP zvikurukuru dzinosanganisira:
• Inductance kubva pazvipfuwo kusvikira pcb iduku;
• Package saizi ipfupi kwazvo arambe achirema dhigirii nani;
• Thermal conduction waivako iri zvikuru kunowedzerwa.
Kusvikira zvino, isu vanokwanisa pakubata WLCSP vane vose shoma asati-Die namo uye Mhiri-Die nenamo anogona kusvika 0.35mm.
0201 uye 01005
Sezvo zvemagetsi kumusika uye zvigadzirwa mberi, kuwedzera kuitika pamusoro miniaturization dzeserura, Laptops etc. inongogara nokutyaira kuti zvinoumba pamwe hukuru zviduku. Kuti batanidza uyu muitiro, isu tanga kuedza kuwedzera chinoumba gungano nezvaanogona kusvika 0201 uye 01005.
Kusvikira zvino, zvose 0201 uye 01005 dzakakurumbira chaizvo mune zvemagetsi pamusika nokuda zvinotevera zvazvakanakira:
• Tiny kwemavara achivaita zvikuru welcome vari muchadenga-wakamanikidza magumo zvigadzirwa;
• Excellent waivako mu functionality enhancement zvigadzirwa zvigadzirwa;
• Inoenderana dzakakwirira arambe achirema zvinodiwa zvemagetsi zvemazuva ano zvinogadzirwa;
• Very mukuru-nokukurumidza zvikumbiro.
Kuti vabudirire gungano nezvaanogona pamusoro 01005, tava akabudirira mukubata zvinhu pamusoro wayo gungano muitiro kusanganisira pcb design, zvinoriumba, solder namatidza, kunhonga uye placement, reflow, rakanyorwa mabhii rinowanzodhinda mapepa uye kuongorora. Our 20+ ruzivo makore 'kunotibatsira muchidimbu kuti maererano post-reflow nyaya, tichienzanisa zvinoumba mamwe marudzi Mabhokisi, zvinoriumba mumapepa pamwe 01005 kuita zviri nani nyaya kubviswa akadai Kukunda, tombstone, unopinza-vakamira, zvachose-pasi, asipo chikamu etc.
We vanokwanisa kushandisa marudzi akasiyana Mabhokisi mu pcb gungano kwacho uye ndima kumusoro akakundikana kuratidza zvose. Kana wako zvaida chinoumba pasuru chimiro isina kutaurwa pamusoro, ndapota usazeza kusvika nesu wonderful@wonderfulpcb.com kwedu rakawedzerwa pasuru mukugadzirisa nezvaanogona.